Tansaaniya ayaa heshay shaybaarro yar-yar oo lagu aqoonsan karo dawooyinka ben-abuurka ah. - Sabahionline.com
Tansaaniya ayaa heshay shaybaarro yar-yar oo lagu aqoonsan karo dawooyinka ben-abuurka ah. Febraayo 28, 2012
Shirkadda dawooyinka samaysa ee Jarmalka ah ee Merck ayaa Isniintii (27-ka February) ku dhawaaqday in ay shan shaybaar oo kuwa gacanta lagu qaadan karo ah ugu deeqday Wasaaradda Caafimaadka iyo Wacnaanta Bulshada ee Tansaaniya si loogu isticmaalo in lagu garto dawooyinka been-abuurka ah. Qodobbo la xiriira
Tansaaniya oo rakibtay sheeybaaro yaryar si ay uga hor-tagto soo galinta daawada been-abuurka ah
Kikwete oo ku baaqay in lala dagaallamo iibka daawooyinka sharci-darrada ah
Mas'uuliyiinta Tansaaniya oo ka digay daawo loogu talagay AIDS-ka oo been abuur ah
"Shaybaarradan la qaadi karo keligood ayaa dunida laga helaa, waxaanay awoodaan in ay dawooyinka la macmalay degdeg u gartaan, waa qiime jaban, waana waxtar,” ayuu yiri Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Caawinta Bulshada Haji Mponda oo ka hadlayey xafladdii deeq-bixinta, sida ay sheegtay jariidadda The Guardian. "Dawooyinka macmalka ahi waa khtar weyn oo caafimaad. Haatan shaybaarradan yar yar waxaannu si toos ah dadka uga difaacaynaa wax noqon kari lahaa halis disha,” ayuu yiri Dr. Karl-Ludwig Kley, guddoomiyaha Guddiga Fulinta ee Merck, oo si rasmi ah deeqda u guddoonsiiyey Mponda. Ururka Bilayska Caalamiga ah ee Interpol ayaa qiyaas ku bixiyay in 30% ka mid ah dawooyinka Afrika lagu isticmaalo ay yihiin macmal ama kuwo tayadoodu ay liidato. Shaybaarradan waxaa la dhigi doonaa baraha xudduudaha ee Tansaaniya. "Dawooyinka been-abuurka ahi waa dhibaato caalami ah…, sidaa darteed waxay in wax laga qqbto uga baahan tahay dadka arrintan ku shaqada leh oo dhan, dawladohooda, shirkadohooda gaarka loo leeyahay, shakhsiyaadka, iwm, haddii aannu doonayno in aannu suuqa ka saarro dawoyinka been-abuurka ah,” ayuu yiri Charys Ugulum oo ah agaasimaha adeegyada shaybaarrada ee Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Tansaaniya Muxuu kula yahay qoraalkan?